Instagram na -ebi ndụ: kedu ihe ọ bụ, otu esi eme ka Instagram dị ndụ | Ozi ECommerce
Netwọk mmekọrịta, mgbe ha rutere, gbanwere ndị mmadụ. Mana, n'ime obere oge, azụmaahịa, ma ụlọ ahịa n'ịntanetị na nke anụ ahụ, malitere ịbanye n'ime ha ịchọta ndị ahịa ha nwere ike ebe ahụ. Otu n'ime ndị na -aga n'ihu bụ Instagram na karịa karịa kemgbe Instagram ndụ.
Mana kedu ihe jikọrọ ya na azụmaahịa? Enwere uru n'ezie maka eCommerce n'iji Instagram Live na -ere karịa? Anyị na -enyocha ya n'okpuru.
1 Kedu ihe bụ Instagram Live
2 Otu esi eme uzo na Instagram
3 Kedu ka o si erite uru eCommerce ime ka Instagram bi?
Kedu ihe bụ Instagram Live
Instagram Live, nke a makwaara dị ka Instagram Live, bụ ngwa ọrụ Ọ na -enyere gị aka ịmepụta vidiyo dị ndụ, ya bụ, site na gị ruo gị, n'etiti ndị na -eso ụzọ gị. N'ụzọ dị otu a, ọ dị ka a ga -asị na ị na -ahazi oku vidiyo maka ndị na -eso ụzọ niile ị nwere na akaụntụ Instagram gị ma kpọọ ha ka ha gee gị ntị nwa oge ka ị na -akọwara ha ihe.
Ngwa a bụ otu n'ime ndị na -eme ihe na -eji, ebe ọ bụ na ha na -enye gị ohere ijikọ ndị na -eso ụzọ ike, na -eme ka ha sonye na mkparịta ụka gị ma mee ka ha sonye site na nkwupụta gị.
N'ezie, ọ bụ ihe na -ewepụ vidiyo a na -edekọ ma na -etinye na netwọkụ mmekọrịta, nke dị ugbu a jụrụ oyi. Ebe enwere ike idobe ihe ngosi ndị a na akaụntụ ka oge na -aga, ị nwere ike mee ọtụtụ wee gaa n'ihu na -ahụ ha ụbọchị ka e mesịrị, ma ọ bụ izu ma ọ bụ ọnwa.
Otu esi eme uzo na Instagram
Ọ bụrụ na ị mebebeghị Instagram Live na mbụ achọghịkwa ka ahụ gị dị ka onye ọhụrụ, buru n'uche ihe anyị ga -agwa gị. N'ezie, tupu ịme nke a, anyị chọrọ inye gị ụfọdụ ndụmọdụ maka tupu na mgbe ị nọ na Instagram ndụ:
Gbalịa ka ị hazie ihe niile. Ọ dị mkpa na ị naghị eme ka ndị na -ahụ gị megharịa ọnụ na ọbịbịa na ọpụpụ, ọ bụghị naanị n'ihi na ha ga -atụfu gị n'ọhụụ ha, kamakwa n'ihi na ha agaghị ege gị ntị.
N'ikwu maka ụda, ọ bụrụ na ịhụ na ha enweghị ike ịnụ gị, mgbe ụfọdụ ọ ka mma ịnwe ngwaọrụ enweghị aka, yabụ ị nwere ike hụ na ha ga-anụ gị nke ọma.
Mgbe ị nọ na ndụ, gbaa mbọ hụ ọkwa ndị ga -abịara gị. Ha nwere ike bụrụ ajụjụ sitere n'aka ndị ọrụ gbasara ihe ị na -ekwu ma ọ dị mma ka ị zaa ha ka ha hụ na ị na -eche banyere idozi obi abụọ. Echegbula ma ọ bụrụ na ị chere na ozi mkparị ga -abanye, na ntọala Instagram ị nwere ike zoo nkwupụta ndị ahụ ka a ghara ịhụ ha.
Ekwula okwu ngwa ngwa ma ọ bụ dị nwayọ, atụkwala ụjọ. Ọ dị ka a ga -asị na ị na -ekwuchitere onye ọzọ okwu, ọbụlagodi na ị hụghị ha n'oge ahụ. Ị ga -enwerịrị ike ịkọwa ngwaahịa gị n'ụzọ ga -eme ka ọ dị mma n'anya ndị na -ahụ ya ma chọọ ịzụrụ ya. Kedukwa otu esi enweta nke ahụ? Ọ dị mma, dị mfe, na -agbalị ime ka o doo anya na ị nwere ike idozi nsogbu ị nwere (ime nke a, jiri okwu dịka "were, chee ..." nke ga -etinye onye ahụ n'ọnọdụ ha nwere nsogbu na ngwaahịa ahụ edozi. ọ).
Ugbu a ee, ị chọrọ ịma ihe bụ nzọụkwụ ị ga -emerịrị iji mee Instagram Live? Nọ ebe a:
Na Instagram gị, ị ga -pịa akara ngosi nke dị n'aka ekpe wee mepee Akụkọ mkpanaka gị.
Mgbe ahụ Pịgharịa gaa na ebe ọ na -ekwu "Ndụ" ma ọ bụ "Ndụ." Ọ ga -fọrọ nke nta na njedebe. Tupu ịnye nnukwu bọtịnụ ahụ nke ga -apụta, ọ dị mma ka ị pịa na ntọala ntọala (n'elu aka ekpe) iji lelee na njikwa dị mma yana na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla, na ihe ndị a na -ekwu na -arụ ọrụ yana na ihe niile na -arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ otu a, pịa bọtịnụ Live.
Ị banyelarị n'ịntanetị, ihe ị nwere ike ime bụ ịkele ndị nọ ebe ahụ, cheretụ ka ha sonyekwuo wee bido ibi ndụ na ihe ịchọrọ ikwu.
Mgbe ịchọrọ ịmecha, ị ga -pịa akara ngwụcha ka ịkwụsị njikọ ahụ. Yabụ, vidiyo a ga -adịgide n'ime akụkọ gị naanị awa 24. Mana enwere aghụghọ na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na ị pịa ntụpọ atọ ị nwere ike bulite ya na otu akụkọ egosipụtara. N'ụzọ dị otu a, a gaghị ehichapụ ya belụsọ ma i jiri aka gị mee ya.
Kedu ka o si erite uru eCommerce ime ka Instagram bi?
Obi abụọ adịghị ya na iduzi ndị na -eme ihe, ndị edemede na ndị ọzọ na -achọ imepụta akara bụ uru asọmpi karịa ndị asọmpi gị. Mana kedu maka eCommerce? Ọ bara uru na -aga na nsogbu ịme Instagram Live?
Eziokwu bụ ee, na ọtụtụ ihe. N'ihi na, n'etiti uru ị ga -ahụ bụ ihe ndị a:
Ị ga -enwekwu njikọ na ndị na -ege gị ntị. Karịsịa n'ihi na mgbe ị na -aga ịmalite vidiyo dị ndụ, ị nwere ike ịgwa ndị na -eso ụzọ gị ka ha gbaa ha ume isonye na vidiyo ahụ. Nke ahụ anaghị eme mgbe ị biputere post na Instagram.
Melite mmekọrịta. N'ihi na ndị ahụ ga -enwe ike ịjụ gị ma bipute nkọwa na ndụ, nke ị nwekwara ike ịza (ọ bụrụ na ị nwere ike gụọ ha). Nke a ga -eme ka ha nwee mmetụta "dị mkpa," nke na -enyere ha aka ijikọ na ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Ọsọ ọsọ nke ịbụ onye ama ama. Were ya na ị na -ekiri vidiyo dị ndụ ma na mberede ha kpọrọ gị aha, ma ọ bụ kwuo ihe dị oke ọnụ ahịa gbasara gị. Obi abụọ adịghị ya, ọ ga -enye gị oke nganga, n'agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị ihe ihere, mana ọ ga -anọ ebe ahụ ị ga -achọ ịhụ ya.
ECommerce na -aghọ mmadụ. Agbanyeghị na a ka nwere ndị na -achọ ka a ghara ịma aha ha ma mee ka ngwaahịa ha na -ere mara nke ọma karịa onwe ha, nke bụ eziokwu bụ na ọha mmadụ chọrọ ugbu a ịmara ihe niile gbasara ihe niile. Na nke ahụ gụnyere ịmara onye nọ n'azụ ụlọ ahịa ịntanetị ebe ị nwere ike ịzụta.
Anyị enweghị ike ibu amụma na ị nwere Instagram Live na mberede ndị na -eso ụzọ gị ga -ezokwasị gị na ndị ị nwere ga -amalite ịza ajụjụ. Nke ahụ anaghị arụ ọrụ dị ka nke ahụ. Ọ nwere ike bụrụ na nke mbụ ị nweghị ihe ngosi ọ bụla. Ma ewela iwe na nke a. Ihe kacha mma bụ ka ị na -agba mbọ, ka ị na -ahụ na ọ na -arụ ọrụ, meziwanye inye ndị ọkachamara nwere ike ịre ọwa ozi ahụ.
N'ikpeazụ, ị ga -amalite ya, ma ọ bụrụ na i mee, ị nwere ọtụtụ ehi. Anyị enwere ike inyere gị aka n'ihe ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Instagram ndụ
Otu esi gbakọọ ọnụ ahịa ire ere
Kedu ihe bụ mmekọrịta ọhaneze na gịnị ka ọ mejupụtara?